कालीगण्डकी कोरिडोरको कामले गति लियो - Sero Fero News
५ असोज २०७८, मङ्गलवार
तानसेनका महिलाहरूलाइ बाख्रा वितरण
मङ्गलवार, असोज ५, २०७८
पाल्पामा शीत काव्य समाज गठनः अध्यक्षमा ज्ञवाली
परिवार याेजना हुनुपर्नेमा जाेड
सोमवार, असोज ४, २०७८
पूर्वखाेला मिडियाको कार्यालय उद्घाटन
पाल्पामा ६३ जना सङ्क्रमित थपिए
आइतवार, असोज ३, २०७८
पाण्डेकाे अध्यक्षतामा नेकपा (एस) जिल्ला कमिटी घोषणा, काे काे छन्…
शनिवार, भाद्र २६, २०७८
पाल्पामा २८ देखी ७२ वर्षसम्मका वडा सभापति ! कांग्रेस वडा…
बिहिवार, भाद्र २४, २०७८
शिक्षक संगठन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष, पप स्कुलका सहायक प्रअ पाेखरेलकाे…
बुधवार, भाद्र २३, २०७८
रम्भा १, हुँगीमा दुइ दर्जन बढी एमाले कार्यकर्ता कांग्रेस प्रवेश
नेपाली कांग्रेस पाल्पा अधिवेशन भदाै २१ देखी, कसरी चुनिन्छन् प्रतिनिधीहरू?…
शुक्रवार, भाद्र १८, २०७८
कांग्रेस १४ औँ महाधिवेशनः पाल्पामा युवा जुर्मुराउँदै
आइतवार, भाद्र २०, २०७८
कालीगण्डकी कोरिडोरको कामले गति लियो
सेराेफेराे डेक्स प्रकाशित मिती - १७ कार्तिक २०७७, सोमवार
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी लोकमार्गको विस्तारको कामले गति लिएकाे छ । कालीगण्डकी काेरिडाेर अन्तर्गत (पिपलडाँडा-गैडाकाेट) खण्डमा कालाेपत्रेकाे काम सुरु भएको छ । पाल्पा – कालीगण्डकी काेरिडाेर अन्तर्गत पाल्पा र नवलपरासी खण्डकाे सडक कालाेपत्रे गर्ने कार्य धमाधम चलिरहेकाे छ । पर्वतमा पर्ने ५५ किलोमिटर खण्डमा रोकिएको कामले तीव्रता पाएको छ ।
पाँच अर्ब ४७ करोडको लागतमा निर्माण शुरु भएको कालिगण्डकी करिडोरको अहिले गैंडाकोटदेखि पाल्पाको राम्दीसम्म १३२ किलोमिटरको काम भइरहेकाे छ । सडक निर्माणकाे ठेक्का पाएकाे भारतीय कम्पनी ईकेके कन्सटक्शनले स्थानीय नेपाली ठेकेदार गौली ग्रुपलाई ठेक्का दिएको छ । सडक निर्माणकाे सम्झाैता अनुसार पाल्पाकाे पीपलडाँडा राम्दीदेखि पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोटस्थित कालिगण्डकी चोकसम्मको १३२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिनेछ । आयोजनाको सडक ११ मिटरको चौडाइमध्ये सात मिटरमा कालोपत्रे, एक एक मिटरको किनारा र एक एक मिटरको नाला रहने कालीगण्डकी काेरिडाेरले जनाएकाे छ ।
लोकमार्ग आयोजना कार्यालयले चालू आवभित्र १२ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने, ७ किलोमिटरमा कालोपत्र गर्ने र बाँकी खण्डको स्तर सुधार गर्नेगरी काम अघि बढाएको छ । कोरिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाका प्रमुख नगेन्द्र सुवेदीले सेतीवेणीदेखि रानीपानीसम्मको खण्ड कालोपत्र गर्न बोलपत्र आह्वान भई निर्माण कम्पनीले काम शुरू गरिसकेको जानकारी दिए । यसको लागत ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
लोकमार्ग अन्तर्गत स्याङ्जा र पर्वत जोड्ने मोटरेबल पुल सेतीखोलामा निर्माणाधीन छ । यस सडक खण्डको मोदीवेणी घाटमा मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
लमाएखोलाको पुलको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा रहेको सुवेदीले बताए । चालू आवभित्रै सेतीवेणीदेखि अर्मादीसम्म सवारीसाधन सञ्चालन गर्नेगरी काम अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । सडक खण्डको मोदीवेणी क्षेत्रमा भने अझै पनि ट्र्याक खुल्न बाँकी छ । बाँकी रहेको ट्र्याक तिहारसम्ममा खोलिसक्ने कार्यालयको तयारी छ ।
यो सडकले चीन र भारतलाई जोड्छ । मुख्यगरी विहादी गाउँपालिकादेखि फलेवास नगरपालिकासम्म जोड्ने ट्र्याकमा अहिले स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । यो खण्ड पनि कालोपत्र गर्न टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी रहेको पर्वतका प्रतिनिधिसभा सदस्य पदम गिरीले बताए । सांसद गिरीले चालू आर्थिक वर्षमै लोकमार्गको रानीपानीदेखि बर्राचौर बाच्छा पाङराङ कुर्घा हुँदै फलेवास ढिकसम्मको सडक कालोपत्र गर्न बजेट निकासाको प्रक्रिया भइरहेको जानकारी दिए । ठेक्का आह्वान प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै उनले बजेटको सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयबाट भएलगत्तै बोलपत्र आह्वान गरिने समेत जानकारी दिएका छन् । बोलपत्र आह्वानको प्रक्रियाका लागि कोरिडोरको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको र फाइल स्वीकृत गराएर चालू वर्षदेखि नै कालोपत्रको काम शुरुआत गराइने प्रतिबद्धता समेत सांसद गिरीले व्यक्त गरेका छन् ।
पाण्डेकाे अध्यक्षतामा नेकपा (एस) जिल्ला कमिटी घोषणा, काे काे छन् समाजवादीमा (भिडियाे)
पाल्पामा २८ देखी ७२ वर्षसम्मका वडा सभापति ! कांग्रेस वडा अधिवेशन सम्पन्न
शिक्षक संगठन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष, पप स्कुलका सहायक प्रअ पाेखरेलकाे निधन
नेपाली कांग्रेस पाल्पा अधिवेशन भदाै २१ देखी, कसरी चुनिन्छन् प्रतिनिधीहरू? (प्रक्रियादेखी संख्यासम्म)
जाे ९५ वर्षमा लैनाे भैंसी पालेर गुजारा गर्छन् !
तानसेनमा छ्याप्छ्याप्ती म्याद गुज्रेका सामाग्री, अनुगमन समितिद्वारा नष्ट !
पाल्पाली ढाका संघको कार्यप्रगति सार्बजनिक
रम्भा गाउँपालिकामा अधिकांश जनप्रतिनिधी नेकपा एमालेमै ! श्रेष्ठ खुले नेकपा…